Oghere Sentinel 3 | ThatsLuck.com
Oghere Sentinel 3 bụ nke atọ na nke ikpeazụ addon maka ►Pụrụ Ime bbylọ, software nke mbụ roulette nke na-enye gị ohere nyochaa na ozugbo ruo Tebụl 20 online.
Kedu ka i siri mara Oghere Sentinel bụ trilogy nke roulette software na-ewe uru nke nlekota nke tebụl rụrụ ►Pụrụ Ime bbylọ ịgbalị iji merie site na-akpọ maka ma ọ bụ megide mfe ohere Ọnọdụ (►Oghere Sentinel 1), kama ịbụ naanị nọmba (►Oghere Sentinel 2).
N'isiokwu ikpeazụ a, anyị na-echegbu onwe anyị karịa ịnwa iji ọnụọgụ ọnụọgụ ọjọọ.
Iji jiri mmemme a ọ dị mkpa ka ịzụrụ akwụkwọ ntuziakaPụrụ Ime bbylọ, na-enweghị nke ọ gaghị enwe ike iji sọftụwia a mee ihe, belụsọ ma inwee ngwaọrụ ndị ọzọ iji weghara ọnụọgụ site na tebụl roulette ma chekwaa ha na faịlụ ederede ma ọ bụ karịa.
Otu Lobby Sentinel si arụ ọrụ 3
Oghere Sentinel 3 na omume ọ nko nko faịlụ ederede e dere na ozugbo site ►Pụrụ Ime bbylọ ma kọwaa usoro ọnụ ọgụgụ metụtara ya ka igbu oge nke otu dị iche iche nke nwere nọmba 1-2-3-4-5-6.
Na Lobby Sentinel 3 ka edegharịrị echiche banyere igbu oge dị ka ndị a: bido site na mkpụrụ ego a na-ede na tebụl dị iche iche, sọftụwia ahụ na-edekọ nọmba ahụ dị ka akara ha dị iche iche wee kee ha ụzọ isii, nke mejupụtara 6 ruo 1, ya bụ ihe obere oge.
N’ebe a ọtụtụ nde tranches random nke otu ogologo dị ka ọnụọgụ nke ederede e dekọrọ ruo mgbe ahụ ka echepụtara e Oghere Sentinel 3 na-ekwenye, na-adabere na otu iche iche, ma ọnụọgụ ọnụọgụ ọnụọgụgụ dị nso na-abawanye ma ọ bụ.
Ihe mbụ ị ga - eme mgbe mmemme a malitere bụ ịhọrọ tebụl anyị chọrọ nyochaa (ya mere echere na ►Pụrụ Ime bbylọ na-agba ọsọ ugbu a ruo oge ụfọdụ ma na-edekọ nọmba ndị ewepụtara na tebụl dị iche iche).
Nke abụọ panel Isiokwu Isiokwu Hoooker, ị ga-pịa bọtịnụ go na aka ekpe wee họrọ otu ma ọ bụ karịa faịlụ ederede ọ na-ede recordingPụrụ Ime bbylọ ma dị na folda ahụ ndapụta site na Lobby Miner, ọ bụrụ na ị nwere obi abụọ na-ekiri vidiyo na ►YouTube, ihe niile g’eme ka doo anya.
Dịka ị pụrụ ịhụ na onyogho a, ahọpụtara m naanị ụfọdụ okpokoro ndị dịnụ, na-ezere tebụl dịka Lightning Roulette, Quantum Roulette, yana roulettes niile na-akpaghị aka, n'ihi na ọpụpụ nke tebụl ndị a abụghị mgbe niile.
Ozugbo nhọrọ a dị mfe ezuchara, anyị nwere ike ịgafe na ngalaba nke atọ Roomlọ Njikwa, nke bụ kpọmkwem ebe anyị na-arụ ọrụ.
N'ebe a, anyị nwere ihe anyị chọrọ iji ghọta ihe na-eme, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ozugbo, na tebụl dị iche iche ahọpụtara na panel gara aga.
Ihe mbụ ị ga - eme bụ pịa bọtịnụ ahụ Bugharịa tebụl Roulette, n'ụzọ dị otú a, a ga-eburu ha n'ime Oghere Sentinel 3 faịlụ niile nke tebụl ahọrọ dị iche iche ma n'eziokwu ị ga-ahụ na ọnụọgụ nke spins edere ga-apụta (Oghere Spins), mgbe kọlụm mbụ (Roulette #) ga - eme ka amata tebụl na ọnụ ọgụgụ na - aga n'ihu 01, 02, 03, wdg.
Ozugbo emere ọrụ a dị mfe, anyị nwere ike nyochaa tebụl njikọ dị iche iche na ụzọ abụọ dị iche iche: ma ọ bụ ihe niile n'usoro site na ịpị bọtịnụ ahụ Nyochaa Tebụl niile, ma ọ bụ otu n'otu n'otu n'otu, site na ịpị bọtịnụ dị iche iche na gburugburu uhie.
N'oge a ọ dị mkpa iji kwusi nkwụsị dị mkpa iji kọwaa nke ọma ụdị ọnụ ọgụgụ a na-enyocha Oghere Sentinel 3.
Ọnụ ọgụgụ dị jụụ
Dị ka m malitere ịkọwa tupu, Oghere Sentinel 3 ozugbo eburu mpịakọta niile nke tebụl dị iche iche, malite ozugbo ịme ọnụ ọgụgụ mbụ, na-emegharị 250.000 tranches (uru egosiri n'ọhịa Anwale #) nke aghara aghara + 12 atụ ogho (uru egosiri n'ọhịa + Spins).
Dịka ọmụmaatụ na ọnụ ọgụgụ al Isiokwu 02 anyị debanyere aha (ekele ►Pụrụ Ime bbylọ) 373 atụ ogho, ya mere Oghere Sentinel 3 ga - emeputa 250.000 nke onu ogugu nwere 373 + 12 = 385 na-atụgharị.
N'ụzọ dị otu a, ọnụọgụ ga-ekpuchi obere ọnụọgụ karịa nke ndị edere ederede n'ezie, mana dịka ị maara na ndekọ Lobby Miner dị na nkezi 6/7 na-egbu oge ma e jiri ya tụnyere ezigbo oge, yabụ nke a ga-enyere anyị aka itinye aka na ezigbo oge. emechaa ka ịghara ida ohere niile igwu egwu
Mgbe nyocha nke mbụ a dị ka ị pụrụ ịhụ na Tebụl 2 na Mmachi kọlụm ndị otu ahụ pụta ìhè na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Ogbogu4, Ogbogu5 e Ogbogu6, Kedu ihe ọ pụtara?
Ọ pụtara na dịka ọmụmaatụ na tebụl 02 ọnụọgụ 4 kacha nta (Cool 4) nwere ngụkọta oge (nchikota nke ndapụta) nhata 17, ebe nkedo a na-egosi na-esote ntụgharị 12 na-esote nọmba a kwesịrị ịbụ "opekata mpe" nhata 18.
Ya mere, anyị nwere ihe ịrịba ama nke mbụ na sorties na-esote ma ọ dịkarịa ala otu nọmba "kwesịrị" ịbụ otu n'ime 12 kachasị oyi (dị jụụ), ebe ọ bụ na mgbe ahụ na-esote panel anyị ga-agbakwunye nọmba 4/6 anyị na-efu ma e jiri ya tụnyere ezigbo oge. , dị nnọọ ndị ọzọ ga-anọgide na-agba 7/6 iji mee ka Rng simulator statistic mezuo (ma ọ bụ).
Ọ bụrụ na mgbe nyocha nke mbụ nke ederede niile edepụtara, anyị anaghị achọpụta tebụl nwere ike ịme ihe, anyị nwekwara ike kpebie ịme nyocha ọhụụ naanị nke ikpeazụ x spins nke okpokoro.
Ọ bụghị ihe a na-ahụkarị na, ọ bụrụ na ihe atụ na 400 spins nke tebụl enweghị akara, site na ịhọrọ nhọrọ ikpeazụ na ọnụọgụ nke ntụgharị nke ịmegharị ọnụ ọgụgụ (100 ikpeazụ, 150, 200, wdg), nyocha ọhụụ ọhụụ na-egosipụta ohere egwuregwu nwere ike.
Ozugbo anyị chọtara ọgụ, anyị nwere ike pịa bọtịnụ ahụ na gburugburu akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, nke ga-akpọrọ anyị ozugbo na windo na-esote, nke bụ panel Na-alụ ọgụ.
Ozugbo anyị pịa otu bọtịnụ na gburugburu akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, ogwe a mepee, ebe ọhụụ Rng ọhụrụ na-amalite na akpaghị aka, mana oge a na 2,5 nde tranches (ubi Anwale #) mebere ọnụ ọgụgụ ntụgharị n'ezie debara aha na tebụl ahụ, gbakwunyere 6 spins (Campo + Spins), nke na-eje ozi dị ka ọ dị ugbu a iji gbakwunye 6 ntụgharị na tranches ka a ga-echepụta, n'ihi na anyị ga-agbakwunye ihe dịka 6/7 n'ezie ma ọ bụrụ na anyị kpebie imeghe tebụl ahụ.
Ana m ekwu nke a n'ihi na ọ gaghị abụ ihe ọhụrụ mgbe niile ịhọrọ tebụl na ngalaba gara aga, nke ọhụrụ na ziri ezi nulationomi nke 2 na ọkara nde tranches adịghị egosi ihe ọ bụla static mma na-ebu ọgụ (n'ihi na ihe atụ na mbiet n'elu maka ìgwè nke 6 ọ dịghị ihe ọzọ ugboro ugboro nọmba, nke kacha nta ugboro chọpụtara na ha 23, hà kacha nta ugboro e dere site na simulator gbakwunye 6 extra spins).
Ọ bụrụ na, n'aka nke ọzọ, mgbe ule ọhụụ ọhụụ ahụ gasịrị, a ga-egosipụta ohere egwuregwu dị ka egosiri na ọnụ ọgụgụ ahụ (ma na otu ndị mejupụtara #5 nke ahụ na-enye #6 nọmba), mgbe ahụ ị ga-emerịrị ozugbo mepee egwuregwu egwuregwu (Turkish Roulette na ihe atụ anyị) ma gbakwunye na ezigbo ịdị adị nke nọmba 6/7 na-efu na-adịgide adịgide ị na-ahụ na kọlụm n'okpuru efu na elu panel.
Na ọnụ ọgụgụ ahụ, nọmba ikpeazụ na tebụl bụ 2 na 1 na-esote XNUMX, ọ bụrụ na site na akụkọ ihe mere eme nke tebụl anyị na-ahụ na ụfọdụ na-efu, wee pịa nọmba dị mkpa ị hụrụ na panel n'elu eserese ahụ na nke a ga-akpaghị aka agbakwunye na-adịgide adịgide.
Ọ bụrụ n ’ọ bụrụ na anyị enwee ohere ịmehie na ịpị nọmba ahụ, pịa ugboro abụọ na nọmba na-ezighi ezi na kọlụm ma a ga-ehichapụ ya.
Ozugbo emeghari oghere niile, emelitere kpam kpam Pịa bọtịnụ ahụ RNG ume, nke na-emeghachi nkedo ọzọ nke 2,5 nde tranches (+ 6 ọzọ spins).
Ọ bụrụgodi na mgbe ule ikpeazụ a gasịrị ọ ka na-egosi na-acha akwụkwọ ndụ ohere igwu egwu, mgbe ahụ ọ na-eche na n'ime 6 atụgharị ma ọ dịkarịa ala otu n'ime 5 ma ọ bụ 6 na-erughị nọmba na-adịkarị ala.
Oghere Sentinel 3 Isi ihe na-acha anụnụ anụnụ nke na-erughị nọmba na-adịkarị, nke oge ụfọdụ nwere ike ịbụ karịa 6, nke a bụ n'ihi na ọ bụrụ na, dị ka ọnụ ọgụgụ ahụ, enwere ọnụọgụ 5 na ọnụọgụ ugboro 5, anyị ga-ahọrọ ihe ị ga-eme, na nke a naanị m na-akpọ nọmba na a ugboro ole nke 2-3-4, nke ga-abụ 33, 22, 12 na 35, maka ngụkọta nke nọmba 4 e n'ihi na ihe ruru 6 spins.
Ọ bụrụ na ọ dị nwute na otu n'ime ọnụọgụgụ nke ugboro 5 pụtara ozugbo, m ga-akwụsị wee laghachi ịchọ ohere egwuregwu ọzọ na panel. Roomlọ Njikwa.
Ọ bụrụ na enwere obi abụọ gbasara ►YouTube achọtara vidiyo ndị na-egosi n'ụzọ doro anya otú Oghere Sentinel 3, dị ka ị ga-ahụ, ịchụ nta maka egwuregwu egwuregwu ga-eme ma na niile spins na na ikpeazụ x spins na egwuregwu ọnọdụ na-adịghị kọrọ, ihe dị mkpa dị ka mgbe niile bụ idozi a stopwin tupu ịmalite igwu egwu50/100 nkeji kwa oge / ụbọchị), ma karịa ihe niile emebighi nzọ 6 kwa ọgụ, n'ihi na ọnụ ọgụgụ dabeere na na kpọmkwem ọnụ ọgụgụ nke spins na ọ dịghị ọzọ.
M na-abụkarị na agba nke mbụ meriri m na-anwale ọzọ maka ịga n'ihu, ọ bụrụ na m merie ọfụma ma m nwaa ọzọ, ma ọ bụghị na m ga-agaghachi na ngalaba isi iji chọọ ohere egwuregwu ọzọ.
Ọ bụrụ n'ịhụ na PC gị na - ewe ogologo oge maka ịhazi usoro, ị nwekwara ike belata ụkpụrụ ndabara (250.000 na ngalaba njikwa Room yana 2.500.000 na Fight Board) wee tinye ihe atụ 150.000 na nke mbụ yana 1.500.000 na nke abụọ , nke a ọ dabere na gị, mee nyocha ụfọdụ wee kpebie, ihe dị mkpa bụ idobe ọnụọgụ nke mgbakwunye ndị ọzọ na tranches, nke bụ 12 na ngalaba mbụ na 6 na nke abụọ.
Ọ dị mma, ugbu a bụ ihe niile, nwee anụrị ma echefukwala ịdenye aha na chanel Telegram ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụchalụ akụkọ niile na akwụkwọ na-abịanụ.
Nbudata Nbudata	LSentinel3.zip - 3 MB